Fihaonana an-tampon'ny Media sosialy | Fihaonambe an-tserasera maimaim-poana | 23 Jona 2021 | Martech Zone
Tsy toy ny tranonkala web nentin-drazana, Fihaonana an-tampon'ny maso ivoho dia hahatsapa ho toy ny zava-nitranga tao an-tsaintsika rehetra tsy hitantsika rehetra. Manomboka amin'ny fahafahanao miresaka mifanatrika amin'ny mpandahateny aorian'ny fampisehoana azy ireo, hatramin'ny fihaonana sy firesahana amin'ireo mpanatrika hafa, dia hisy fotoana be dia be ho an'ny fotoana majika. Ireto misy lohahevitra vitsivitsy fotsiny ao amin'ny fandaharam-potoana:
Ahoana ny fomba fananganana rafitra fivarotana azo refesina ho an'ny masoivohonao - Midira amin'i Lee Goff rehefa manarona ireo andry 4 amin'ny rafitra fivarotana mahomby sy azo refesina izy. Ny rafitrao dia hampitombo avo roa heny ny fitarihanao, hiantohana fa tsy misy firaka mihintsy amin'ny vakivaky, manome fitantanana fantsom-pifandraisana amin'ny antsipirihany, KPI mangarahara ho lasa zava-bita ary maro hafa… .
Ahoana ny fandrefesana haingana kokoa ny fahafahanao misafidy - Jason Swenk dia hasehoko anao ny fomba hanombatombanana samirery ny dingana misy eo amin'ny maso ivoho misy anao, ary ny tena tokony hataonao amin'ny dingana ankehitriny sy ho avy mba handrefesana haingana ny maso ivoho mba hahatratraranao ny tampon'isa.
Ahoana no mihazakazaka & mitantana fanamby ho an'ny mpanjifa - Kelly Noble Mirabella no mitarika an'ity fivoriana fialantsasatra ity izay hanehoany anao ny raikipohy hizahana fanamby fohifohy ao anatin'ny roa andro na mandritra ny iray volana. mora ny mamorona fanamby mahatalanjona hahasarika ny mpanaraka anao sy hitazomana azy ireo hiverina bebe kokoa raha fantatrao ilay rijan-teny. Tsotra ihany koa izy io ka afaka manao izany ny olona ao amin'ny orinasa misy anao - na dia tsy mahay teknolojia aza ianao! Plus, Kelly dia hizara aminao izay ilainao hahitanao mpanohana (raha tianao izy ireo), drafitra atiny, ary ny fananana rehetra ilainao hahomby.
Ahoana ny fomba hitantanana sary ho an'ny mpanjifa marobe - Fantatsika rehetra ny fotoana ilaina amin'ny famolavolana sary ho an'ny marika tokana. Fa ahoana kosa rehefa mitantana marika marobe ianao? Mety ho fanamby ny fitazonana ny tsy fitovizan'ny marika ary mijanona ho ambony indrindra amin'ny takian'ny sary ho an'ny vokatra ara-tsosialy, nomerika ary ivelan'ny tranonkala Amin'ity seho ity, i Annette McDonald dia hamakivaky ireo alàlan'ny workflect izay azonao apetraka mba hahafahan'ny maso ivoho ho lasa mahomby kokoa, ary handanjalanja, amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny ekipa tsirairay hifehezana ny famoronana atiny mahavariana ho an'ny mpanjifanao tsirairay mora !
Ahoana ny fomba hamohana ny paikady hampitomboana ny fahafahanao misafidy - Inona no tsy itovizan'ny mpitondra ambony amin'ny fampitomboana ny maso ivoho? Tsy ny hoe 'inona' fotsiny fa ny 'ahoana' no anaovan'izy ireo izany, isan-taona, isan-telovolana ary isam-bolana. Ny rafitra sy ny fizotrany takiana dia hasehon'i Robert Craven. Ary mahagaga fa tsy momba ny siansa rocket na ny teôlôjia manintona clogs ity. Hizara ireo fitaovana ampiasain'ny masoivoho mihaja be an'arivony izahay.
Ahoana ny fomba fitantanana ny lalàna mifehy ny mpanjifa sy ny zon'ny mpamorona - Amin'ny maha tompona maso ivoho anao, ny zavatra farany mety tianao hoeritreretina dia ny fifanarahana na olana ara-dalàna, kanefa maka fotoana mialoha mba hahazoana antoka fa efa nametraka fifanarahana teo amin'ny toerany ianao, ary manara-penitra amin'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona farany mifandraika amin'izany amin'ny atiny media sosialy, afaka manampy anao hiaro anao amin'ny olana lafo vidy eny an-dàlana. Amin'ity fivoriana feno fampahalalana ity dia hianatra avy amin'ny mpisolovava be mpitady indrindra ianao, Mitch Jackson mpanoratra, ary handeha lavitra miaraka amin'ny fahatakarana mazava tsara hoe rahoviana no hampiasa fifanarahana amin'ny asan'ny maso ivoho, inona no hatao, ary ny fomba hiheverana ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona amin'ny marketing nomerika.
Ahoana ny fomba hitantanana doka Facebook ho an'ny mpanjifa - Izany dia mihoatra ny etikety fotsiny. Halaviro ireo vela-pandrika mety hiteraka ny kaontin'ny mpanjifanao na ny kaontin'ny masoandronao voarara amin'ny fanaovana doka amin'ny Facebook. Ianaro ny fomba hananganana sy hidirana amin'ny kaonty Facebook mpanjifanao mba hiarovana anao amin'ny maha masoivohona anao ary hitazomana ny kaontinao rehetra amin'ny toerana tsara. Midira amin'i Amanda Robinson - The Digital Gal ary ianaro ny fomba fitantanana soa aman-tsara ny sehatry ny fandraharahana, pejy, kaonty doka, piksela, katalaogy ary bebe kokoa amin'ny anaran'ny mpanjifa.
Agencies: Ahoana no ahafahanao mamorona ilay Pitch mandresy, Data-Driven? - Manomboka amin'ny fiovana amin'ny fomba fitantanan'ireo marika ny asa aman-draharaha, mankany amin'ny fiovan'ny fifantohana amin'ny fifamatorana nomerika, ny COVID-19 dia nanokatra varavarana ho an'ny fanamby sy ny fahafaha-manao ho an'ireo masoivoho sy ny mpanjifa. Ankehitriny, mihoatra noho ny hatramin'izay, ireo masoivoho dia mamerina amin'ny laoniny ny tenany mba hamenoana ny filan'ny mpanjifa sy ny vinavinany. Ny fitadiavana ny fahafaha-manao asa vaovao, ny fifampiraharahana amin'ny fifaninanana mihamitombo, ary ny fanamorana ny mpanjifany no sasany amin'ireo fanambin'ny indostria lehibe atrehin'ireo masoivoho. Ka mba handresena ireo fanamby ireo ary hijanona eo an-tampon'ny lalao, tsy maintsy atao fitaovana ny data-nao! Amin'ity fivoriana ity, Aurelien Blaha dia hanampy anao hahita ny fomba hanampian'ny Digimind Search History anao hampihena be ny fotoana laninao amin'ny fiomanana amin'ny sehatra iray, hifandraisany sy hatoky tena amin'ny fahitana tarihin'ny angona, ary hitondra aingam-panahy vaovao amin'ny famoahana ny fampielezan-kevitra manaraka .
Zahao ny fandaharam-potoana manontolo miaraka amina fotoam-pivoriana am-polony maro hafa! Ary koa, misy ny tambajotra, trano heva vokatra ary fampisehoana vokatra!
Misoratra anarana amin'ny fihaonana an-tampon'ny Agency
Disclosure: Douglas Karr masoivoho ho an'ny mpandrindra ny hetsika, Agorapulse, ary mampiasa rohy fanarahana izahay amin'ity fampandrenesana ity.
Tags: fahafahana misafidyfihaonana an-tampon'ny masoivohoagorapulseannette mcdonalddigimindgal nomerikaJason swenkkelly olo-malaza mirabellalee goffmitch jacksonconference onlineRobert cravenmasoivoho media sosialyfihaonana an-tampon'ny maso ivoho media sosialyvalandresaka an-tserasera amin'ny media sosialy